ओछ्यानलाई कसरी बनाउने आकर्षक? यस्तो बनाउँदा के हुन्छ? « Sudoor Aaja
१९ आश्विन २०७८, मंगलवार ०६:५९
ओछ्यानलाई कसरी बनाउने आकर्षक? यस्तो बनाउँदा के हुन्छ?
सुदूर आज १९ आश्विन २०७८, मंगलवार ०६:५९
काठमाडौं- भनिन्छ, हरेक व्यक्तिको नीजि जीवन ओछ्यान मै विकसित हुन्छ। ओछ्यानलाई आकर्षक, लोभलाग्दो तथा विशेष बनाउनका लागि थोरै कुराहरुमा ध्यान दिए पुग्छ।
ओछ्यानमा हरेक व्यक्तिले जीवनको करिब एक तिहाइ समय बिताउने भएकाले पनि यो कोठाको आफ्नै विशेष महत्व हुन्छ। ओछ्यानलाई हामीले केवल सुत्‍ने कोठाको रुपमा मात्र लिनु हुँदैन। ओछ्यानलाई उर्जाको स्रोत तथा मानसिक शान्ति प्राप्त गर्ने स्थानको रुपमा समेत विकसित गर्न सकिन्छ। यदि यसो गर्न सकियो भने हामीले हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारका सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छौं। हामीले हाम्रो सम्पूर्ण थकान तथा चिन्तालाई बिर्सने ठाउँ पनि ओछ्यान नै हो, त्यसैले यो कोठालाई सुविधाजनक बनाउन सक्दो मेहनत गर्नु पर्दछ।
ओछ्यानलाई कसरी आकर्षक बनाउने?
– ओछ्यान को बेडका सुतीको कपडाको तन्ना छनोट गर्नु पर्छ। सुतीको तन्ना निकै आरामदायी हुन्छ। सिरानी र डसना धेरै कडा अथवा धेरै कोमलभन्दा ठिक्कको हुनुपर्छ।
– ओछ्यान मा ओछ्यानलाई त्यस्तो स्थानमा राख्नुपर्छ जहाँबाट घरको मुख्यद्वार देख्न सकियोस्।
– ओछ्यान लाईर् व्यक्तिगत फिलिङ दिनका लागि उक्त कोठाको भित्तामा बालबालिकाको पहिलो तस्बिर, साथीभाइ, आफन्तजनद्वारा प्रदान गरिएका शुभकामना कार्डहरु सजाएर राख्नु पर्छ।
– ओछ्यान लाई सधैं सफा, व्यवस्थित र आकर्षक राख्नुपर्छ। अस्तव्यस्त कोठाले व्यक्तिको अन्तर्द्वन्द्वलाई दर्साउँछ।
– ओछ्यान को आन्तरिक सजावटका लागि हजारौं रूपैयाँ खर्च गर्नुको साटो स- साना परिवर्तन गरेर पनि कोठालाई रोमान्टिक लूक्स दिन सकिन्छ।
– ओछ्यान मा सानो खालको बुक शेल्फ बनाएर त्यसमा रोमान्टिक उपन्यासहरू सजाउन सकिन्छ।
– श्रीमान्-श्रीमीतको राम्रो तस्बिर फ्रेमिङ गरेर भित्तामा सजाउनुपर्छ।
– रोमान्टिक फिल दिन कोठामा डिफ्युज्ड लाइटको प्रयोग गर्नुपर्छ।
– ओछ्यानमा रंग लगाउँदा पनि विचार गर्नुपर्छ। रोमान्टिक फिल दिनका लागि पिंक रंग छनोट गर्न सकिन्छ।
– ओछ्यानलाई सुगन्धित राख्‍न तन्ना, पर्दा आदिमा दुईचार थोपा एरोमा ओयल छर्न सकिन्छ।
– गुलाबबज, मोगरा, लेवेन्डर आदिका ड्राइ प्याकेटलाईर् ओछ्यान मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
– कोठामा बस्ने व्यक्तिको रुचिअनुसार ओछ्यान को रंग छनोट गर्नुपर्छ। बालबालिकाका लागि रेड, ब्लु जस्ता ब्राइट कलर्स, मिडिल एज र बुढाबुढीको कोठाका लागि पिंक, लेवेन्डर, ग्रीन जस्ता लाईट र सुदिङ कलर छनोट गर्नुपर्छ।
– पर्दा, बेडसीट आदिका लागि फ्याबि्रक छनोट गर्दा विशेष सावधानी अंगाल्नुपर्छ। जस्तै बालबालिका र युवाको कोठामा पि्रन्डेड, एनिमेटेड आदि फ्याब्रिक राम्रो हुन्छ।
– ओछ्यान मा आवश्यकताभन्दा बढि प्रयोग गर्नु हुदैन। ओछ्यान को कुनै एउटा भित्तालाई मात्र बेग्लै थिम दिएर सजाउन सकिन्छ।
– ओछ्यानको अर्थ हो सुत्ने कोठा। त्यसैले यो कोठामा सुतेपछि गहिरो निद्रामा निदाउन सक्नु पर्छ। त्यसका लागि बेडरुपममा प्रकाशको व्यवस्थापन पनि आकर्षक हुनु पर्छ। आँखामा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने खालको चिमको प्रयोग गर्नु पर्छ। राति अँध्यारोमा सुत्ने बानी छैन भने ओछ्यान मा नाइट ल्याम्प राख्नुपर्छ। राति सुत्नेबेलामा पढ्ने बानी छ भने बुक ल्याम्प पनि राक्न सकिन्छ।
साफ फाइनल आज : पावरहाउसबाट उपाधि खोस्ने दाउमा नेपाल
साफ फाइनलका लागि शुक्रबार भारतसँग खेल्दै नेपाल काठमाडौं– दक्षिण एसियाको सबैभन्दा प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल आज शनिबार
चेन्नईलाई चौथोपटक आईपीएलको उपाधि
काठमाडौं । चेन्नई सुपर किङ्सले चाैथोपटक इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । शुक्रबार राति भएको खेलमा
चेन्नईले कोलकातालाई दियो १९३ रनको लक्ष्य
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको फाइनल खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई १९३ रनको लक्ष्य दिएको